Golaha siyaasiyiinta reer Waqooyi oo weli ka cabanaya Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha siyaasiyiinta reer Waqooyi oo weli ka cabanaya Farmaajo
Gole ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa walaac ka muujinaya faragelinta qaawan ee uu ku hayo Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo sida dib u habeynta iyo magacaabista guud ahaan guddiyada doorashooyinka, gaar ahaan kuwa u xilsaaran doorashada kuraasta gobollada waqooyi.
Golaha oo ay ku mideysan yihiin xildhibaanada labada aqal ee BJFS iyo siyaasiyiin magac ku leh midnimada umadda Soomaaliyeed ayaa waxay ka cabanayaan fara gelinta qaawan ee Farmaajo ka wado magaalada Muqdisho oo ay ka socoto xulista guddiyada, sidoo kalena lagu qaban doono tartanka kuraasta gobollada waqooyi ee BJFS.
Ra'iisul Wasaaraha maqaar saarka ah ee Rooble ayey dhowr jeer kala hadleen siyaasiyiintani waxaana lagu war geliyay in howsha soo xulidda guddiyada doorashooyinka gobollada waqooyi ay soo kala magacaabi doonaan RW ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi sidii ku qorneed heshiiskii lagu doorashooyinka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho, balse arrintaas ayaa u muuqata Qawda maqashii waxna ha uqaban!
Cabashada siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa waxaa sal u ah fara-gelin qaawan oo uu ku hayo Farmaajo, isagoo ka shaqeynaya sidii uu mar kale kusoo laaban lahaa, inkastoo ay xusid mudantahay in kuraasta gobollada waqooyi oo kaliya aysan ku filneyn Farmaajo!
Halkan hoose ka akhriso war qoraal ah oo ay soo saareen siyaasiyiinta ka biyo-diidsan habka uu wax uwado Farmaajo: